Akụkọ banyere #Hashtags | Martech Zone
Akụkọ banyere #Hashtags
Fraịdee, Nọvemba 8, 2013 Tọzdee, Septemba 4, 2014 Douglas Karr
Y’oburu na ohuru n’agha hashtags, lelee nke a Hashtag Ntuziaka. Fọdụ ndị na-ebi akwụkwọ ka na-atụ egwu mgbe ha na-arụ ọrụ hashtags ebe ọ bụ na ọ dị iche na nke na-adịghị mma. Achọrọ m ịmata ihe mere nyiwe anaghị ezochi akara ngosi a ma tinye hyperlink ka ederede dị mfe ọgụgụ. Otu ụzọ ahụ mgbe ị pịnyere @ ma ọ bụ + na Facebook ma ọ bụ Google +… ikpo okwu na-ezochi akara ngosi ma jikọọ nke ọma na akaụntụ ị na-akọwapụta.
Hashtag abụghị nanị ụzọ nyocha na ịkọ akụkọ, ha bụ ụzọ dị egwu nke ịme nyocha na isiokwu enyere - ma ọ bụ ịnweta ozi gbasara otu isiokwu. Anyị edepụtara ndị kacha mma hashtag research ngwaọrụ n'ihi na ị bụrụ na ị chọrọ ka a miri miri amaba. Kedu ihe hashtags maka ngwaahịa, ọrụ na ụlọ ọrụ gị? Gini bu olu gi na mkparita uka ndia? Enwere mkparịta ụka na-eme na ngalaba ahịa na azụmaahịa gị kwesịrị ịbanye n'ime?
Ma ọ kwụsịghị ebe ahụ. Hashtags ejikọtara ndụ nke ụbọchị ọ bụla, kwa ụbọchị. Site na ihe osise Instagram nke ụmụ akwụkwọ na tweets nke CMO, ojiji nke hashtags emego ngwa ngwa. Na infographic a, Offerpop chịkọtara ụfọdụ oge dị mkpa nke ndụ hashtag iji nweta echiche ka mma banyere otu akara ngosi a si wee bụrụ akara ngosi ụwa.
Tags: chris mesinachrismessinaakpa hashtaghashtagakụkọ ihe mere eme nke hashtagsinfographicenye onyinyeTwitter
Kapost: Njikọ Aka Ọdịnaya, Mmepụta, Nkesa, na Nyocha
Ulo oru ntanetị choro igbanwe ahia ka ha noro